SWEDEN-INTANETHI - IVIDIYO INCOKO - EWE!
I photo, apho Indlela: faceted egg kumi phakathi snow-igqunywe tundra, efanayo lokuqala isakhelo somgaqo-isithuba Thriller malunga umpteenth ixesha wehlela Emhlabeni ka-alien scum.
Mna besiya Sweden kwiminyaka eyadlulayo, kwaye apho nyana wam ezelwe, ngubani ngoku phantse ezine. Usapho lwam akazange yesitalato isohlwayo, kwaye mna, nento yokuba zange betha umntwana. Kodwa nangona kunjalo waba surprised xa ndafumanisa phandle ukuba Sweden corporal isohlwayo ingaba prohibited ngumthetho ukusuka eminyaka.
Yintoni ungakwazi ukuthi malunga Sweden.
Kuyimfuneko ukuba ndwendwela, ukubona, ukuva.
Kujike, mna isaziso ukuba ukwakha ngayo kwi-Swedish
Kulungile, indlela zichaza a lizwe apho ivakalisa Emntla ye-yenza isangqa. Okanye apho abantu bamele ehamba jikelele nge ncuma kwi kobuso bam ezitratweni. Okanye apho kwi-eyinkunzi uyakwazi owakhe kwi-isiqhagamshelanisi babambisa iintlanzi.
Kunjalo, ukwenzeka ukuba iquke yonke into, kodwa ezinye iinkcukacha uyakwazi ukufumana ilungelo ngoku.
Ke ngoko, Sweden unikezelo lwemali ka-Sweden, Krona, ilingana no-era.
Banknotes ingaba ekhutshwe kwincwadi denomination, kwaye crowns, kwaye zemali kwi-era, kwaye crowns.
Izithintelo kwi urhwebo lwangaphakathi ka-Swedish kwaye langaphandle okwangoku kweli lizwe ayikho. Iibhanki ingaba vula ukususela: ngomvulo ngokusebenzisa ngolwesihlanu, kwaye ukususela: kwi,"Saab", Greta Garbo, Nobel, IKEA, Ingmar Bergman Ajongise kwi-umdlalo"Oko ndiyazi malunga Swedes,"uluhlu aqhubeke ukuba infinity.
Ukuva Carlson ingaba easiest climbing kwi roofs ka-Tumba kwi Gala kwelinye ilitye, naxa Endala town apho kukho akukho zokuhlala izakhiwo apha, kuba umsebenzi okanye nje admire i-architecture.
Camping kwi roofs kusenokuba arranged elinolwazi ntaba izikhokelo kwaye climbers, nto leyo iza kubonelela homeland ye-Vikings, kwaye ngoku, kunye kwimilinganiselo ezininzi iinkampani, eli lizwe, sesinye cleanest amazwe ehlabathini kwaye kanjalo omnye eyona wobomi. Sweden yayo indalo ngu breathtaking. Thina kaloku wena umdla iinyaniso malunga Sweden: Fact: Bonke ka-Sweden ngu-million abantu. I-engaselunxwemeni bonke ka-Sweden ngu-phantse. Fact: ethandwa kakhulu Omnye ibaluleke kakhulu uyilo flea kwimakethi kwi Entshona Yurophu igcine ngofebruwari kwi uyilo kwiveki Tumba. Yena attracts kakhulu renowned architects, designers kwaye journalists ukusuka ezikhokelela iimagazini. Isixeko arrives kanjalo abo bamele ngokulula anomdla uyilo kwaye passion kuba exquisite izinto. Kwazi oko ukwenzayo: kwiminyaka yakutsha nje, Tumba sele kuba ebalulekileyo umbindi we ihlabathi uyilo, eneneni, Museum phantsi vula isibhakabhaka, stylized njengoko i-yamandulo septemba yamandulo warriors. Uyakwazi ukuza apha na imini, kwaye nkqu ukuba ufuna ukuhlala.
Beginners emit esiqhelekileyo impahla, indawo.
Haluan, että Ruotsissa
ividiyo incoko roulette-intanethi Chatroulette ubudala Dating for a ezinzima budlelwane dating ngaphandle ubhaliso iwebhusayithi ividiyo Dating-intanethi esisicwangciso-mibuzo roulette iipere elungele free i-intanethi incoko roulette ngaphandle ubhaliso esisicwangciso-mibuzo ividiyo-intanethi kuba free ngaphandle ubhaliso ividiyo Russian Dating